Akhbaarti Zamaanki Hore .. Qoomki Reer Caad Xoogi Iyo Awoodi Ay Sheeganayeen Iyo Halka Ay Ku Dambeeyeen
Reer Caad waxay lahaayeen Sanamyo loo bixiyey SAD, SAMUUD iyo HIR. markay gaaloobeen kadib waxa Eebe Naxariistiisa u soo diray Nin Walaalkood ah waa Nabi Huud, waxaanu Amray sidii Nabiyada oo dhani farijireen Qoomkooda, waa inay Eebe kaligii caabudaan, kana tagaan Sanamyada ay gacmahooda ku samaysteen. Nabi Huud waxa uu faray inaanay Eebe cid kale lala wadaajin.
Waxay ugu jawaabeen Huudoow waxaad tahay Beenaale waanad jirrantahay waxaana ku asiibtay caradii ilaahyadayada (Sanamyada).
Qoomkii Caad way kibreen oo iswayneeyeen moodeena inay yihiin Dawlada ugu Xoog weyn dunida waqtigaas ayaga oo ilaaway in Eebihii Abuuray ka Xoog wayn yahay.
Nabi Huud waxa uu Xasuusiyey Nimcooyinka Eebe ku manaystay ee uu usahlay inay Dhistaan Qasriyo iyo Guryo aan baahi u haynin sidi ayaga aad moodid inay aduunyada ku waarayaaan.
Kibirkoodu waxa uu gaarsiiyey inay cid-kasta oo ka awood yar u awood sheegtaan sida iminka ka dhacaysa dunida, dawladaha xooga leh kuwa ka awooda yar ayey ku itaalsadaan waxayna ilaaween Eebihii abuuray inuu ka xoogwayn yahay.